किन भयो शेयर संख्यामा वृद्धि हुँदा पनि सबै सूचकहरुमा फराकिलो अन्तरको गिरावट? | Suvadin !
किन भयो शेयर संख्यामा वृद्धि हुँदा पनि सबै सूचकहरुमा फराकिलो अन्तरको गिरावट?
एकपछि अर्को गर्दै दिनहुँ शेयर बजारमा भएको गिरावटले लगानीकर्ताको सम्पत्ती तिब्र गतिमा घट्दै गईरहेको छ भने उनीहरूमा निराशाजन छाएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जको तथ्यांकलाई मात्र आधार मान्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७२–७३ देखि चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा समग्र बजार पूँजीकरण १५ खर्ब ९१ अर्ब रुपैंयाबाट १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैंयामा झरेको छ।
Jul 10, 2018 18:19
काठमाडाैं, २६ असार – पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षको नेपाली शेयर बजारलार्इ नियाल्दा धेरै उत्तरचडाव देखिन्छ साथै धेरै नयाँ कार्यहरू पनि भएका छन्। यस अवधिमा भएका कतिपय कामको असरका सम्बन्धमा कुनै लेखाजोखा राखिएको छैन।
बजारमा शेयर संख्या भारी मात्रामा वृद्धि हुँदा सबै सूचकहरुमा फराकिलो अन्तरको गिरावट आएको तथ्यांकले देखाएको छ। यस अवधिमा बजार पूँजीकरण मात्र झण्डै २० प्रतिशतले घटेको छ।
नेप्से तथा बोर्डको यो तथ्यांकलाई छाडेर गत भदौको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने बजार पूँजीकरण १८ खर्ब रुपैंयाको हाराहारीमा थियो। त्यस पछिका दिनमा बजारमा आएको निरन्तरको गिरावटले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पूँजीकरण १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैंयामा झरेको हो। यसरी छाटो समयको अन्तरालमा बजार पूँजीकरण ६ खर्बले घट्दा लगानीकर्ता समस्यामा त परेका छन् नै, मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई पनि यसले नकरात्मक असर पारेको छ।
समीक्षा अवधिमा सूचीकृत कम्पनीको संख्या २३० बाट १९५ मा झरेको छ। राष्ट्र बैंकको पूँजी योजनका कारण धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिँदा यो संख्यामा गिरावट आएको हो। यो अवधिमा दर्जनौं कम्पनीहरुले साधारण शेयर निष्काशन गरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकृत भैसकेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा २ अर्ब २ करोड कित्ता शेयर सूचिकृत भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्ममा आइपुग्दा ३ अर्ब ५४ करोड कित्ता शेयर सूचिकृत भएका छन्। शेयर सूचिकरणमा आएको यो वृद्धि २२ प्रतिशत बढी हो। राष्ट्र बैंकका साथै बीमा समितिको पूँजी योजनाका कारण समेत बजारमा शेयर संख्या तिब्र रुपमा बढेको छ।
यसरी शेयर संख्या तिब्र रुपमा बढ्दा पनि पूँजीकरण, बजार सूचकका साथै समग्र सूचांकहरुमा भारी गिरावट आएको हो। आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा १ खर्ब ३२ अर्ब ८४ करोड रुपैंयाको शेयर कारोबार भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैंयाको सेयर कारोबार भएको छ।
यस अवधिमा औसत दैनिक कारोबार ६२ करोड ६६ लाख रुपैंयाबाट ५४ करोड ६२ लाख रुपैंयामा झरेको छ। यद्यपी पछिल्ला दिनमा यो औसत अनुसारको शेयर कारोबार हुन सकिरहेको छैन। बोर्डको तथ्यांक अनुसार समीक्षा अवधिमा बजार परिसूचक नेप्से १६१४ अंकबाट १२४७ अंकमा झरेको छ।
मंगलबार बजार परिसूचक १२०५ अंकमा अडिएको छ। अरु कुनै पनि सूचकमा सुधार हुन नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ। यसरी बजार कै कारण लगानीकर्ताको भाग दौड मच्चिने अवस्था उत्पन्न भैसकेको छ। निरन्तरको गिरावटले बजार तल्लो विन्दुमा झरिसकेकाले लगानीकर्ता आशावादी हुन खोजिरहेका छन्।
तर, केही कारोबारीहरुले दैनिक रुपमा नाफा सुरक्षित गर्ने क्रमलाई तिब्र बनाए पछि आम लगानीकर्ताको यो आशलाई कमजोर बनाई रहेको छ। यसले दोस्रो बजारलाई झनै कमजोर बनाउने देखिन्छ।